सर एसईई कहिले हुन्छ ? | Edupatra
बैशाख २३, २०७८ गणेशप्रसाद उपाध्याय
परिक्षा नियन्त्रकलाई खुलापत्र
रास्ट्रिय परिक्षा बोर्ड
बिषय: एसईई र १२ को परिक्षाको निकास सम्बन्धमा।
महोदय, आजभोलि मलाई मोवाइमा फोन आयो कि दिक्क लाग्छ । मलाई हरेक दिन अभिभावक तथा विद्यार्थीको एउटै प्रश्न ‘सर एसईई कहिले हुन्छ ? सर्यो कि ? निर्धारित मितिमा नै हुन्छ ? हुन्छ भने हामी कसरी परीक्षा केन्द्र सम्म पुग्ने ? के गर्ने जस्ता प्रश्नले वाक्क दिक्क लगाउँछ । किनकि म एक जिम्मेवार शिक्षक मात्र हुँ । निर्णयक तहको मान्छे होइन ।
परिक्षा हुनु नहुनु ठुलो कुरा होइन । प्रमुख कुरा भनेको विद्यार्थीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन भन्ने हो । वैकल्पिक सिकाइलाई प्रभावकारी बनाएर सिकाइलाई निरन्तरता दिनु उचित होला जस्ते लाग्छ म र म जस्ता अन्य शिक्षकलाई ।